समृद्धिको पाइला चाल्ने यो उपर्युक्त बेला हो : डा. उपेन्द्र महतो,
समृद्धिको पाइला चाल्ने यो उपर्युक्त बेला हो : डा. उपेन्द्र महतो
डा. उपेन्द्र महतो, संस्थापक अध्यक्ष एवम् प्रमुख संरक्षक (एनआरएनए) : धेरै लामो समयपश्चात् मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यो सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । जनताले विकास र समृद्धिको सपना देखेको धेरै भयो । अब जनताको सपना साकार पार्ने बेला आएको छ । समृद्धिको पाइला चाल्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
देशमा भएका नदी तथा पानीका स्रो तहरूको उचित व्यवस् थापनले सिंगो मुलुकको विकासमा ठूलो टेवा पु¥याउन सकिन्छ । मैले त सुरुदेखि नै नेपालको विकासको लागि ठूलो क्षेत्र भनेको जलस्रोतको विकास नै हो भन्ने गरेको छु । हाइड्रोमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले सिंगो मुलुकको विकासमा धेरै ठूलो योगदान पु¥याउँछ । पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने ग्रिन जोन, कृषिजन्य वस् तुहरूको उत्पादनमा वृद्धि एवं तल्लो तटमा बाहै ्रमास सिँचाइ तथा स् वच्छ खाने पानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने मुलुकभरि नसोचेको समृद्धि हासिल हुन्छ ।
नयाँ सरकारसामु अथाह सम्भावना छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो सरकार जसबाट लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । हामीजस्ता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यो त खुसीको कुरा हो । अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरतासहितको उच्च आर्थिक बृद्धिको सम्भावना देखिएकोले विदेशी लगानीमा पनि चासो बढेको छ । यसो भनिरहँदा म के कुरामा प्रष्ट छु भने नेपाल कुनै पनि विदेशीले आएर बनाइदिने होइन । नेपाल तपाईं हामीले नै बनाउने हो । हामीले नबनाए नेपाल कसैले पनि बनाउँदैनन् । सधैंभरि परमुखी र परनिर्भरताका आधारमा देशको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्नु हुँदैन । यदि यस्तो गल्ती गरियो भने देश सधंै पछि पर्छ । पछ्यौटेपनबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ । बरु ढिला नगरी देशको आर्थिक विकास र जलस्रोतसम्बन्धी भरपर्दो र राष्ट्रिय हितको दीर्घकालीन नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । हामी नेपालीहरू नै नेपाल बनाउने अभियानमा पहिले लाग्नुपर्छ । हामी तातेपछिमात्रै विदेशीहरूले हात बढाउँछन् । सुरुवात हामीबाटै हुन जरुरी छ ।
ऊर्जाको विकाससँगै हामीले पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने अर्को ठूलो क्षेत्र भनेकै पर्यटनको विकास पनि हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू नेपाल आउन रुचाउँछन् । हामीले अब उनीहरूलाई सोहीअनुसारको सुविधाहरू दिलाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा पनि हाम्रो भारत र चीनसँग सामाञ्जयस्ता छन् । भारत र चीनबाट मात्रै पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याउने हो भने विकासमा यसले ठूलो टेवा पु¥याउँछ । त्यस्तै नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारत र चीन दुवैसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक नेपाली स्वरोजगार नभएसम्म राष्ट्र समृद्ध हुन सक्दैन् । राजनीतिक अस्थिरतालाई समाप्त पार्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उद्योगपति, व्यापारी, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको छ । देश विकास र निर्माणमा विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले एनआरएनएको स्थापनामा सामूहिक पहल गरेका थियौं । म आज पनि सोही मान्यताबाट अघि बढिरहेको छु । एनआरएनए एउटा संस्था मात्र नभएर साझा सपना बोकेको अभियान हो । नेपालको समृद्धिमा आफ्नो क्षमताअनुसारको योगदान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
देशको समृद्धिका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा गर्दा एनआरएनएले नेपालका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाएको हो । व्यक्तिगत रूपमा अभैm पनि एनआरएनएले केही न केही गरिरहेकै छ । सामूहिक रूपमा केही प्रोजेक्ट पनि अघि बढ्न थालेका छन् । त्यो परियोजना भविष्यमा अभैm बढ्दै जाने कुरामा दुई मत छैन । हामी भित्रि आत्मादेखि नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौं । त्यसैले एनआरएनएले के ग¥योभन्दा पनि अभैm धेरै गर्न बाँकी छ । हामी मुलुकको विकासमा नै समर्पित छौं ।
प्रस्तुति : रुद्र कार्की (यो लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालको संस्थापक स्मारिका अब पाइला समृद्धिको बाट साभार गरिएको हो ।)
बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुने, सिन्डिकेटधारी व्यवसायी छटपटीमा
बजेटमा दिगो विकासका लक्ष्य समेटिने विश्वास
सुन्धरास्थित् होटल गुलावमा आगलागी